Ethiopia oo qabatay 15- qof oo xiriir la leh Al-Shabaab
Home Somali News East Africa Ethiopia oo qabatay 15- qof oo xiriir la leh Al-Shabaab
Sida ay lee yihiib Booliska Ethiopia, waxa lagu xiray bariga waddankaas illaa 15-qof oo xiriir la leh ururka Al-Shabaab ee dalka Soomaaliya.
Dadka la qabtay ayaa la sheegay in damacsanaayeen weerrar ay ku qaadaan waddanka Ethiopia sida ay lee yihiin hey’addaha sirdoonka waddankaas.
Waxa la sheegay in dadkan oo watay qoryaha fudfudud in lagu qabtay magaalooyinka Harar iyo Kemise oo ku yaalla bariga iyo waqooyiga sida ay sheegtay hey’adda sirdoonka waddanka Ethiopia oo loo soo gaabiyo (NISS) .
Dadkan ayaa lagu soo qabtay howlgal qaatay illaa sagaal maalin oo waydeen ciidamada ammaanka Ethiopia sida uu sheegay TV-ga dalkaas ee ETV.
Xukuumadda Addis Ababa ayaa ciidamo u soo dirtay Soomaaliya, si ay ciidamada kale ee Africanka uga caawiyaan kuwaasoo dagaalo kula jira Al-Shabaab muddo lix sano ah.
Dadkan ayaa la sheegay in ay ka soo gudbeen xadka Ethiopia ay la wadaagto waddamada Kenya iyo Soomaaliya.
Talaadadii la soo dhaafay ayaa maxkamad ku taalla Ethiopia waxa la soo taagay 10-nin oo la sheegay in ay ka tirsan Al-Shabaab kuwaas dhaqaale ku caawin jiray Al-Shabaab Soomaaliya oo xiriir la leh al Qaeda.
Muslimiin reer Ethiopia ayaa dhawaanahan dibadbaxyo ka dhigay waddanlkaas kuwaasoo ka soo horjeeda dhibaateen dowladda ay ku heyso.
Ciidamada Ethiopia ayaa Soomaaliya waxa ay kula dageen intii u dhexeysay 2006 illaa 2009 ciidamadii midowgii maxkamaddaha Islaamiga.